Bahrain Inombolo Yefoni | Uhlu Lwezingcingo | Database lakamuva Lokuposa
I-Bahrain Inombolo Yefoni
Database lakamuva Lokuposa » I-Bahrain Inombolo Yefoni
Izinombolo zocingo ze-Bahrain
Uhlu lwezinombolo zocingo lwe-Bahrain lufake uhlu lwe-5,000 lwabathengi befoni / uhlu lwenombolo yeselula. Sebenzisa uhlu lwezinombolo zefoni lweBahrain ukukhuthaza nokuthengisa imikhiqizo yakho sekuyindlela yokuthengisa engenamandla. Uma ufuna inethiwekhi yocingo nabantu abanamandla negunya lokuthatha izinqumo ezibalulekile.
Uhlu lwenombolo yeselula yomthengi we-Latest Mailing Database iqoqa inombolo yeselula eBahrain. I-Telemarketing yethu ihola idlala uhlu olubalulekile kunoma yimuphi umkhankaso wokuthengisa ngokunikeza imininingwane yokuxhumana nezinombolo zocingo zabathengi abanentshisekelo kwimikhiqizo yakho.
Asiyona inkampani engu- # 1 iyi-broker uhlu lwentengiso enobudlelwano neklayenti elikhulu lokwenza uhlu lwentengiso. Vele uye kwinketho zokungeza inqola bese uthenge leli database ekuqaleni namuhla ukumaketha kwakho ngezingcingo noma umbhalo omkhulu we-SMS b2c amatende.
Thenga i-Bahrain Consumer People Ucingo Ucingo
I-Bahrain Consumer Ucingo Uhlu
IDatabase Yeposi Lamakheli noma i-Latestdatabase.com inikeza uhlu olugcwele lwezinombolo zocingo lwabathengi beBahrain ezinamakhono wokuhlunga angenamkhawulo, izisebenzi ezinolwazi kakhulu ukukunikeza umphumela omuhle. Izindleko eyodwa kuzo zonke izinhlobo zokuhola ezihlosiwe hhayi nje kuphela enkulu abahlinzeki bohlu nokwazi izidingo zakho maqondana nohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi ukukwenza waneliseke.
Idathabheki yeMailing yakamuva noma i-Latestdatabase.com ingumthombo wohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi be-Bahrain. Inikeza ukunemba kwemininingwane engu-95%, okuqinisekisiwe futhi okuqoqwe ngabasebenzi bethu okuqoqiwe kusuka kumasayithi athembekile kanye nesikhulumi sikhetha uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi, uhlu lweselula, igama, ikheli, izwe nekhodi ye-zip. Ngakho-ke, ukwenza i-telemarketing yakho, ukumaketha kwe-sms kanye nokushaya okubandayo.
Ukuthenga inombolo yefoni yabathengi yeBahrain uluhluis okuyindlela esetshenziswa kakhulu ebhizinisini lakho. Imininingwane eqinisekisiwe kunazo zonke ongasiqinisekisa ukumaketha okusebenzayo nendlela elula yokuncenga ikhasimende lakho ukuthi lithenge imikhiqizo yakho ngokuchofoza nje.
Izinombolo zocingo zabathengi be-Bahrain zabathengi abangu-5,000 abalungiswa kabusha behlu lwezingcingo zabathengi olufika ku- $ 250, isoftware etholakalayo esheshayo engaba ifomethi yefayela le-Excel CSV lokukhokha ngesikhathi esithile ongalikhokha nge-master Card, i-paypal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-visa, intshonalanga inyunyana nezindlela ezikhokhelayo. Ngakho-ke, ukuthola eminye imininingwane nezinye izinsizakalo ungavakashela isayithi le-Feddabase.com ukuthola imininingwane yakho.
Bahrain Ucingo Inombolo Uhlu Umbuzo & Impendulo
Uhlu lwefoni lwaseHong Kong
Uhla lweNombolo Yeselula yeHungary
Inombolo Yezingcingo yase-Iceland
Uhlu Lwedatha Lekhompyutha le-Indonesia